पाटन अस्पतालका डाक्टरद्धारा श्रीमति उपचारका लागि गएका डाक्टरसँग दुर्व्यवहार : बकपत्र « Today Khabar
पाटन अस्पतालका डाक्टरद्धारा श्रीमति उपचारका लागि गएका डाक्टरसँग दुर्व्यवहार : बकपत्र
प्रकाशित ८ पुष २०७५, आईतवार १३:४१
डा.अजय साह, डेन्टल सर्जन, जनकपुर अञ्चल अस्पताल, धनुषा
काठमाडौं । कुरा गत मंसिर २६ गतेको हो, श्रीमती सुत्केरी हुनका लागि हामी काठमाडौं आयौं । यो हाम्रो दोस्रो सन्तान थियो । सबै कुरा सामान्य नै थियो । सबै रिपोर्टहरु पनि सामान्य नै थियो । तर, सुत्केरी हुने दिन नजिकिँदै गर्दा जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकले सल्लाह दिए कि यहाँ भन्दा राम्रो धरान वा काठमाडौं नै जानुस । त्यसपछि घरपरिवारको सल्लाहमा हामी काठमाडौं आयौं । मेरो मामाले मलाई ललितपुरको पाटन अस्पतालमा राम्रो सुविधा र उपचार हुन्छ भनेर त्यहि जान सल्लाह दिनुभयो र हामी त्यहि गयौं । २७ गते पाटन अस्पताल पुग्यौं । अस्पतालमा भएका डक्टरहरु मध्ये स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा।शारदा श्रेष्ठ राम्रो हुनुुहुन्छ भन्ने सबैले सल्लाह दिए र हामीले टिकट कटायौं ।
डा.शारदाले केहि जाँचहरु गराउन भन्नुभयो र सोमबार नभए मंगलबार नै अपरेशन गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिनुभयो । श्रीमतीको रिपोर्ट सबै सामान्य छ भनेर मैले भन्दा पनि उहाँले नर्मल डेलिभरि हुन गाह्रो छ त्यहि भएर सिजेरियन नै राम्रो हुने भनेर भन्दा हामी पनि कन्भिन्स भयौं र त्यहि अनुसार सोमबार अपरेशनको लागि अस्पताल पुग्यौं । सोमबार अस्पताल पुग्दा डा.शारदाले आज अपरेशनको लागि हेर्नुपर्छ अपरेशन थिएटरमा के छ अवस्था भनेर बुझेर बुझ्छु भन्नुभयो । एकछिनपछि हुन्छ भर्ना हुनुस भनेर भन्नुभयो । मैले अस्पतालको सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बिलहरु तिरेर श्रीमतिलाई भर्ना गरे ।
अपरेशन भोली अर्थात् मंगलबार मात्रै हुन्छ भनेर भन्नुभयो । हामीले त्यसमा पनि हुन्छ भन्यौं र मंगलबार अपरेशनका लागि श्रीमतिलाई थिएटरमा लगियो । अपरेशन भयो छोरी जन्मेको कुरा डाक्टरले भन्नुभयो । अपरेशनमै संलग्न एक जना बालरोग विशेषज्ञ डा.ले बच्चाको मुटु बन्द भएको र हामी सकभर प्रयास गर्दै छौं भनेर सुनाउनुभयो । मैले भने ठिकै छ डाक्टर साब प्रयास गरिदिनुस् भनेर भने उहाँले हामी लागि रहेका छौं भन्दै फेरि भित्र थिएटरमा जानुभयो । त्यसको करिब एक घण्टापछि डा.ले हामीले तपाईंको बच्चालाई बचाउन सकेनौं भनेर भन्नुभयो ।
मनभरि पीडाको भारि पर्यो, ६ वर्षपछिको हुन लागेको सन्तानको खुशि क्षणभरि मै उड्यो । मैले धन्यवाद दिँदै भने केहि छैन यस्तै हो भाग्यमा लेखेको थिएन भनेर आफैंलाई सान्त्वना दिए । त्यसपछि एकछिन बच्चालाई हेर्न पाइन्छ की भनेर म बाहिर उभ्दै मात्र के थिए मलाई डा.शारदाले नराम्रो स्वरमा बोल्दै भनिन्, ‘किन तपाईं यहाँ आको, हामीले जानेर तपाईंको बच्चालाई मारेको हो र ? जानुस तपाईं यहाँबाट, कसले बोलायो तपाईंलाई भित्र ?’
मलाई केहि बुझ्नमै आएन, आखिर मैले गरे के ? मेरो बच्चा जो अब यो संसारमा छैन उसलाई हेर्न पाउने मेरो अधिकार होइन र ? तर, यी सब प्रश्नको पोको लिएर म बाहिर निस्के । यो घटना एक पटक होइन अस्पतालमा होउन्जेल पटकपटक दोहोरियो । डा.शारदाको व्यवहार देखेरपनि म सामान्य अवस्थामा नै बोल्दै थिए, ‘ठिकै छ डाक्टरसाब जे हुनु थियो त्यो भइसक्यो । मैले कसैलाई कुनै आरोप लगाएको छैन ।
तर, पनि मलाई हेर्नासाथ उहाँको व्यवहार र बोलि बदलिन्थ्यो ।’ म पनि पेशाले डाक्टर हो र एउटा डाक्टरले आफ्नो बिरामीसँग गर्ने व्यवहार नै यदि यस्तो हुन्छ भने त्यो अस्पतालमा बिरामीको के हाल हुँदो हो भनेर यसैबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । अस्पतालमै भएका एक जना चिनेकै डक्टरको नाम लिँदा पनि डा.शारदा झनक्क रिसाउने र ठूलो स्वरमा कराउन थाल्ने । उनको यो व्यवहारले गर्दा नै मैले सम्बन्धीत सबै निकायमा उजुरी गरिसकेको छु । #हाम्रो डक्टर्स न्यूजबाट
सांसद रेशम चौधरी गम्भीर विरामीहुँदा वीर अस्पतालको इर्मजेन्सीमा भर्ना
काठमाडौंः जेल जिवन बिताई रहनु भएका राजपा नेपालका सांसद रेशम लाल चौधरी अस्पताल भर्ना हुनु
वैदेशिक रोजगारीको डरलाग्दो पक्षः एक दशकमा ७,३०४ को मृत्यु
काठमाडौंः वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये पछिल्लो एक दशकमा ७ हजार तीन सय चार जनाको ज्यान गएको